I-oxiracetam ewutshisayo (62613-82-5) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
I-Oxiracetam ye-powder emfushane (ividiyo ye-62613-82-5)
I-oxiracetam ewutshisayo (62613-82-5) Siziqu
Igama Product I-oxiracetam ewutshisayo
I-Drug Class Izidakamizwa zeNootropics
CAS Inombolo 62613-82-5
I-molecular Weziyisishiyagalombili 158.15
Ukuxuba Pi-oint I-165-168 ° C
I-Half Half-Life 8 amahora
Color I-White Solid
Aukuphikisana I-Nootropic. I-Analog ye-Piracetam enomsebenzi we-psychostimulant.
I-Oxiracetam ye-powder ephezulu (62613-82-5) Incazelo
I-Oxiracetam eyiphunga ebizwa ngokuthi i-Piracetam futhi ivuselela isimiso senzwa esisemkhatsini, ikhuthaza ukuphefumula komqondo, ikhulise kakhulu futhi ikhuthaze ukugcinwa kwememori, futhi iphumelela ngokuphatha imemori ye-senile nokuncipha kwengqondo. Isetshenziselwa ukwelapha ubuchopho ukukhubazeka kwengqondo psychiatric kanye nokuphazamiseka kwengqondo. Kungathuthukisa imemori nokufunda amakhono weziguli ezinokucindezeleka okuncane noma izinkinga zememori. Kufanele ukwelapha ukukhubazeka kwe-neural, ukukhathazeka kwememori kanye nokuphazamiseka kwengqondo okubangelwa ukulimala kwengqondo. Ingasetshenziswa futhi njengelashwa lokuphulukisa i-neurosis, ukulimala kwengqondo, i-encephalitis, nezinye izifo zobuchopho. Inzuzo enkulu kakhulu ye-Oxiracetam powder yukuthi iyancibilika kakhulu emanzini, okwenza kube kufanelekile ngomjovo. Ucwaningo lubonisa ukuthi i-Raw Oxiracetam powder inomsebenzi ophakeme wezokwelapha kanye nemiphumela ephawulekayo yokwelapha uma kuqhathaniswa nePiracetam.
I-Oxiracetam powder (62613-82-5) Inqubo yesenzo
I-Oxiracetam ivikelekile ngokumelene nama-amnesia okukhulunywe yi-scopolamine emiphakathini yomphakathi nakubantu, okusikisela ukuthi kungasiza ekutheni uthola ukuphuza ngokweqile nakwezinye izimo ezingaboni kahle ngokugcina amazinga afanele e-acetylcholine njengendlela eyinhloko.
I-Oxiracetam iboniswe ukwandisa ukukhululwa kwe-acetylcholine ngaphakathi kwamaseli we-hippocampal. Njengoba i-acetycholine ihilelekile ekusebenziseni ukuhlanganiswa kwenkumbulo, lokhu kungase kubhekane nemiphumela yayo ye-nootropic.
Izinzuzo of I-Oxiracetam powder (62613-82-5)
Kunconywe I-Oxiracetam powder (62613-82-5) Isilinganiso
Okuqhamuka uma udla imishanguzo of I-Oxiracetam powder (62613-82-5)